Canshuurta canshuurta ee Maraykanka: Sony, Nintendo iyo Microsoft waxay ku midoobaan Trump - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Canshuurta Ganacsiga ee Maraykanka: Sony, Nintendo iyo Microsoft waxay ku midoobaan Trump
Qiimaha konsolatooyinka dhowr ah ayaa si weyn u kordhi doona canshuurta ay bixiso Donald Trump iyo hoggaamiyeyaasha suuqa ayaa muujinaya walaacooda.
Shirkadaha waaweyn ee ciyaaraha ayaa welwelsan. Sidaas darteed, Nintendo, Sony iyo Microsoft ayaa warqad u diray si ay u muujiyaan walaacooda dowladda Mareykanka canshuurta soo jeediyay Trump. Waxay rabtaa in ay hirgeliso canshuurta 25% ee alaabta laga keeno Shiinaha, taas oo saameyn ku yeelan karta suuqa cayaaraha video ...
Korodhka qiimaha ah ee konsollada ee laga yaabo inay ku fashilmaan mashruuca canshuurta Trump
Tani waa warqad isugeyn ah oo ay soo dirtay Sony, Nintendo iyo Microsoft Xafiiska Maraykanka ee loogu tala galay ganacsiga. Doonida ayaa ah in la baddalo siyaasadda ganacsiga ee ganacsiga gardarada ah ee Trump. Dhab ahaantii, waxay rabtaa inay abuurto canshuur cusub ilaa 25% ee alaabta laga keeno Shiinaha.
Shirkadahaas, go'aankani waxay yeelanayaan saamayn xun, khaas ahaan tan tan canshuuraha canshuuraha, kombiyuutarrada iyo kombiyuutarada. Natiijo ahaan, macaamiisha Maraykanku waxay u badan tahay inay arkaan qiimaha qunsuliyadaha.
Sidaa darteed, waxaa lagu qiyaasay inay guud ahaan qarashgareyn doonto 840 million dollar oo dheeraad ah si ay u iibsadaan Xbox console, PlayStation ama Switch in the United States. Dhamaadka, ciyaartoyda badan ayaa laga yaabaa inay iska indhatiraan iibsiga qunsul cusub.
Star consoles kuwaas oo ay u badan tahay inay qarash badan ku qaataan Mareykanka
Isla markaa, haddii hoos u dhac ku yimaada iibka, waxay sidoo kale halis gelineysaa shaqooyin badan. Ugu dambeyn, gawaarida waaweyn ee ciyaaraha ayaa sidoo kale qiyaasaya in caadadani ay caqabad ku tahay caqabadaas [illaa] naqshad farsamo ee qaybteena iyo wixii ka baxsan ".
« Inkasta oo aanu ka mahadcelinayno dadaalka maamulka ee lagu ilaalinayo hantida cilmiga ah ee Maraykanka iyo in la ilaaliyo hantida Maraykanka ee qaybta sare ee tiknoolajiyadda, dhibaatada aan kala go'a lahayn ee ay sababtay canshuurahaas macaamiisha Maraykanka iyo ganacsiyada ayaa wiiqi ma gaari doono hadafyadan ".
Seddexda ciyaartoy maahan kuwa kaliya ee ku fekeraya, maaddaama tani waa xaalada Apple, oo u dirtay warqad la mid ah. Shirkaddu waxay rumaysantahay in siyaasaddan dhaqanku aysan ahayn wax wanaagsan oo lagu iibinayo iPhone ama MacBook, iyo in ay tagto " waxyeelaynta hogaamiyayaasha tiknoolajiyada Maraykanka, oo khalkhal galinaya awooddooda inay ku horumariso ".
Bill Gates wuxuu ka xun yahay in Android uu noqday qofka kaliya ee rakibaya Apple
Blair Witch: Cabsida halista ah waxaa ka mid ah Manta iyo Firfircooni fudud
Shaashado shaashadda Microsoft Surface ah ayaa laga yaabaa inay ku shaqeeyaan Android
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.begeek.fr/taxes-douanieres-us-sony-nintendo-et-microsoft-sunissent-contre-trump-320640
Fantasy Final: Sony Photos Television si loo soo saaro Taxanaha Nolosha Live-Action oo leh Hivemind
Emily Ratajkowski isboorti caloosha oo ku jirta maro isku dhejis ah ... ka hor inta aan la wadaagin dharka naadirka ah ee ... - VIDEO